Hassan Sheikh oo u Ola-olaynaya in Aqalka sare hoggaamiye kooxeed soo Galaan,waa kuwee ? – Kismaayo24 News Agency
Hassan Sheikh oo u Ola-olaynaya in Aqalka sare hoggaamiye kooxeed soo Galaan,waa kuwee ?
by admin 14th October 2016 081
Muddo kabadan 20 Sano oo dalkeena uu ku jiray dagaal sokeeye oo guri walba galay , dhibaato raadkeeda uu weli muuqdana uu ku reebay ayna hor boodayeen hogaamiye kooxeedyo qaab beeleed u habaysan, waxaa iminka u muuqda shacabka Soomaaliyeed rajo ah in
dowladnimo ay soo dhowdahay. dadaalka dib loogu soo celinayo dowladnimada Soomaaliya oo marba heer soo maray ayaa dhamaadkii sanadkii 2012 ka gaaray heer fiican markii Soomaaliya ay heshay dowlad aan ku-meel gaar ahayn oo Madaxweyne uu ka noqday Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, weji ku cusbaa Soomaalida oo rajadii jirtay laba jibaaray.
Madaxweyne Xasan wuxuu kaga duwanaa Madaxdii xilka kaga horeysay inuusan ka qayb qaadanin dagaaladii sokeeye , taa oo dareen fiican gelisay dadka Soomaaliyeed oo ka daalay hogaanka dagaal oogayaal nabad ku qaatay inay madax u noqdaan caruurtii ay agoonteeyeen iyo shacab aan awood lahayn misna isku duubnayn.
Hadaba 4 sano ka dib doorashadii rajada keentay maanta dalkeena wuxuu ku jiraa marxalad kala guur ah, waxaa loo diyaar garoobayaa doorasho ka duwan midii shacabka Soomaaliyeed ay ku riyoodeen ee ahayd 2016 ka doorasho qof iyo cod ah, tani oo ka dhigan in nidaamka 4.5 ee qabaa’ilka markale lagu soo doorto xildhibaanada aqalka hoose (golaha shacabka) iyo kuwa aqalka sare. doorashadani oo ka duwan kuwii hore u dhacay ayaa shacabka Soomaaliyeed waxaa ay ku eegayaan indho feejigan waxayna rajaynayaan in madaxda imaan doonta ay si un uga duwanaadaan kuwa xilka ka dhamaaday, taas bedelkeeda madaxda ayaa iyaguna ku shaqaynaya inay xilalkooda ku soo laabtaan ama ay helaan xilal ka sareeya kuwii ay hore u hayeen.
Xilka loogu tartan badanyahay waa kursiga Madaxweynenimo, siyaasiyiin magac iyo maal leh oo uu ku jiro Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loolan ku jira , waxaana soo baxaya cabasho xoog leh oo ku aadan arintaasi maadaama uu Xasan Sheekh haysto awood ka duwan musharixiinta kale isagoo hogaaminaya guud ahaan Barnaamijka dowladda ee doorashooyinka.
Cabashada musharixiinta ay ka simanyihiin ayaa waxaa ay tahay in madaxweynaha uu u isticmaalayo qarashka dowlada ololihiisa doorasha isagoo ka bilaabaya inuu taageero dad ay saaxiibo yihiin si ay u noqdaan xildhibaano ka dibna ay isaga u doortaan , arintani ayaa cirka isku shareertay markii laga war helay in dadka uu wato Xasan Sheekh ay ku jiraan hogaamiye kooxeedyo magacyadooda la iloobey sidaCabdi qaybdiid , Morgan iyo Muuse Suudi Yalxow.
Dad ka agdhow Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu amray in musharixiinta lagu soo daro hogaamiye kooxeedyadani gaar ahaan Cabdi Qaybdiid iyo Muuse Suudi, si ay uga mid noqdaan Xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya isagoo saaxada siyaasada ku soo dhoweynaya qabqablayaal leh taariikh madow , arintani hadii ay dhacdana waxaa ay shacabka soomaaliyeed gelin doontaa niyad jab wayn,Sida oo kale wuxuu ka hor imaanaya Heshiisyadii hor qalinka loogu duugay.
lama yaqaano waxa uu Madaxweynaha uga dan leeyahay in uu madax ka dhigo shakhsiyaad maqalka magacayadooda keliya xanuun ku ah inbadan oo shacabka soomaaliyeed ka mid ah hase ahaatee waxaa muuqata in maskaxda Madaxweynaha ay ku jirto maahmaahdii ahayd ”Dantaada maqaar eey baa loogu seexdaa”
Oo aad gamoorahakan maran gama’ la’aan diiday,
Guumays cirroobaan ahaye war an ku gaarsiiyo,
Giddigood addoomaha waxaa gaaray nabar weyne,
Gabagabadii Shacabka Soomaaliyeed dan uguma jirto maanta in dib loogu celiyo marxalad aan wanaagsanayn oo ay weliba kasoo gudbeen haddii la gaarsiin waayey midii loo ballan-qaaday oo ahayd in ay iyaga wax doorran-doonaan , waxaana quman oday dhaqameedyada salka u ah doorashada inay is hortaagaan wax kasta oo niyad jabin kara shacabka ay metelaan maadaama ay ka warqabaan baahidooda oo ah , Dowlad keenta rejo cusub , rajo cusubna waxay ku imaataa weji cusub iyo maskax cusub.
W/D Mohamuud Ali Jeenyoole
War Hada: Meydka Ruux La Gowracay oo lasoo dhigay Geedaan u dhaw Magaalada……
Shir Caalami ah oo Muqdisho ka Furmaayo Iyo Maamuladda Qaar oo kasoo…